हट्दै गरेको शैलीबाट तपाईँ द्रुत नयाँ शैली सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले म्यानुअल ढाँचा लागू गर्नुभयो.
तपाईँले सिर्जना गर्न चाहनुभएको शैली कोटिको प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् ।
कागजातमा क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ शैली बाट प्रतिलिपि गर्न चाहनुहुन्छ, उदाहरणका लागि, अनुच्छेदमा जहाँ तपाईँले म्यानुअल ढाँचा लागू गर्नुभयो.
शैली नाम बाकसमा नाम टाइप गर्नुहोस्l
नयाँ शैली तान्ने-र-छोड्ने बाट सिर्जना गर्न:
कम्तिमा एउटा क्यारेक्टर चयन गर्नुहोस्, वा वस्तु, शैलीमा जुन तपाईँ प्रतिलिपि गर्न चाहनुहुन्छ. पृष्ठ र फ्रेम शैलीहरूका लागि, कम्तिमा एउटा क्यारेक्टर वा वस्तु पृष्ठ वा फ्रेममा चयन गर्नुहोस्.
चयनहरूबाट शैलीहरू अद्यावधिक गर्दा
Title is: चयनहरूबाट नयाँ शैलीहरू सिर्जना गरिँदै